कर्णको गोलसँगै झापा फाइनलमा | Hamro Khelkud
एपिएफ प्रधानमन्त्री कपको च्याम्पियन!
क्यानलाई ललितपुर महानगरको २० लाख!
कर्णको गोलसँगै झापा फाइनलमा
दशौं रुस्लान फाल्गुनन्द गोल्डकपको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा ए डिभिजन क्लब सरस्वती युथ क्लबलाइ हराउँदै झापा ११ फुटबल क्लब उपाधिका नजिक पुगेको छ ।
सरस्वती क्लबलाई १–० ले हराउँदै झापा उपाधि नजिक पुगेको हो । झापा उपाधिबाट अब एक कदममात्र पछि रहेको छ । झापाको जितमा कर्ण लिम्बूले बिजयी गोल गरे । झापाले अब भोली हुने त्रिभुवन आर्मी र रोयल फुटबल क्लब दार्जिलिङ बिचको बिचको बिजेता संग उपाधिको लागी प्रतिस्पर्धा गर्ने छ ।
शुक्रबार भएकोे सेमिफाइनल खेलमा पहिलो हाफ शुन्यको बराबरीमा सकिएको थियो । ५४ औं मिनेटमा देबेन्द्र तामाङले प्रहार गरेको फ्रिकिकमा गोल गर्दै कर्णले झापालाइ अग्रता दिलाए । पहिलो हाफमा झापाले गोलका केहि अवसर गुमाएको थियो । दोश्रो हाफमा दर्जन बढी अवसर गुमाउदा सरस्वती पराजित हुन पुग्यो ।
७१ औं मिनेटमा तिर्थ बस्नेतको प्रहार पोलबाट थोरै बाहिरीँदा सरस्वतीले बराबरी गर्ने अवसर गुमायो । सरस्वतीका विदेशी खेलाडी फ्रन्सीसले दोश्रो हाफमा पाएका पाँच सुन्दर अवसर गुमाउदा सरस्वती अभागी साबित हुन ।
झापाका दिलेन लोक्तान म्यान अफ दि म्याच बने । उन नगद दश हजार प्राप्त गरे । खेलाडीहरुले राम्रो खले पनि स्कोर गर्न नसक्दा पराजित भएको सरस्वतीका प्रशिक्षक प्रदिप नेपालले बताए । खेल सोचे अनुरुप नभए पनि सफलता प्राप्त गरेकामा खुसी रहेको झापाका प्रशिक्षक प्रबेश कटुवालले बताए । फाइनल खेलमा आजको गल्ती सुधार गर्दै उपाधि जितले कटुवालको भनाइ रहेको छ ।
प्रतियोगितामा मोफसलका चर्चित क्लबहरु र ए डिभिजन सहित दश टिमको सहभागीता रहेको छ । पूर्वकै प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता फाल्गुनन्द गोल्डकपको दशौं संस्करणको विजेताले उपाधि सहित नगद चार लाख प्राप्त गर्ने छ ।
फाल्गुनन्द गोल्डकपमा शनिबारको खेल
त्रिभुवन आर्मी र रोयल एफ.सि क्लब दार्जीलीङ